စပ်မိ စပ်ရာ (၈) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » စပ်မိ စပ်ရာ (၈)
စပ်မိ စပ်ရာ (၈)
Posted by nagargyi on May 18, 2011 in Critic | 12 comments
သတင်းစာတွေမှာ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်တဲ့ သတင်းတွေ တွေ့လို့ တွေးမိ မြင်မိတာလေး ရေးလိုက်တာပါ။
အမွေဖြတ် တာတွေကြည့်ရင် အများအားဖြင့် မိဘ သဘောမတူတဲ့ သူကိုယူတာနဲ့ ငွေကိုဖြုန်းလို့ ဆိုတာတွေ့ ရတယ်။
လုပ်ငန်းရှင် သူဋ္ဌေးတစ်ယောက် တွေ့ဘူးတယ်။ သူ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကလည်း တော်တော်အောင်မြင် ပါတယ်။ သူ့သားတစ်ယောက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းမှာကတည်းက ရည်ငံနေကြတယ်။ သူ့သား ကျောင်းပြီးတော့ သူ့ရည်စားနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မိဘကိုဖွင့်ပြောတယ်။ အဖေဖြစ်သူက သဘောမတူဘူး။ အဓိက အကြောင်းကတော့ မိန်းကလေးဖက်က ငွေကြေးမပြည့်စုံမှု့ ကြောင့်ပေါ့။ သူ့သားကလည်း မိန်းကလေးနဲ့ မခွဲနိုင်တော့ ခိုးပြေးတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ အဖေဖြစ်သူမှာ ဒေါသပေါက်ကွဲပြီး ချက်ချင်း အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေငြာပါတော့တယ်။
နောက်တစ်ဦးလည်း တွေ့ဘူးတယ်။ သူက ဌာနတစ်ခုမှာ အရာရှိကြီးပါ။ သူ့သားတစ်ယောက်က ဘွဲ့ရပညာတတ် တစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက အခုခေတ် တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး လို့ခေါ်တဲ့ ဘောလုံး၊ နှစ်လုံးထီ၊ ချဲထီ လောင်းတာ ဝါသနာ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ လောင်းကစားနည်း တွေကလည်း နည်းနည်းလောင်းတဲ့ သူတွေသာ လက်ငင်းပိုက်ဆံ ပေးပြီး လောင်းကြတာ။ များများလောင်းတဲ့ သူတွေကြတော့ ယုံကြည်မှု့နဲ့ တစ်ပါတ်လုံးပြီးမှ စာရင်းရှင်းကြတာ။ ပထမတော့ သူ့ဟာသူ အဆင်ပြေနေတယ်။ နောက်တော့ ရှုံးပြီးအကြွေး မရှင်းနိူင်တော့ ဒိုင်က အိမ်လိုက်တောင်း တာပေါ့။ အဲဒီတော့ မိဘတွေကလည်း မျက်နှာပျက် သိက္ခာကျ မှာစိုးတာနဲ့ ရှင်းပေးလိုက်တာပေါ့။ အဲဒီလို အိမ်ကရှင်းပေးရတာ ခဏခဏပဲ။ ဒိုင်တွေကလည်း အိမ်ကရှင်းပေးမှန်းသိတော့ သူလောင်းချင်သလောက် ပေးလောင်းတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခေါက်ကျတော့ သိန်းရာနဲ့ ချီသွားတယ်။ အဲဒီလောက်များတော့ အိမ်ကလည်း မရှင်းပေးတော့ဘူး။ သားကို အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ကြောင်း သတင်းစာမှာ ကြေငြာထည့်တယ်။ သားကလည်း ခဏရှောင်နေပြီး နောက်တော့ အိမ်ပေါ်ပြန်တက် နေတာပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့သူဆိုရင် အလွယ်တကူ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်လို့ မရဘူးလို့ မှတ်သားဘူး ပါတယ်။ မြန်မာနိူင်ငံမှာရော နိူင်ငံတကာမှာပါ ဥပဒေက အတူတူ ပါပဲ။ သားသမီး ဖြစ်သူဟာ မိဘကို ရန်သူလို ဆဲဆို၊ ရိုက်နှက်၊ စော်ကားတာကို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က သက်သေရှိမှ အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ကြောင်း ရုံးကိုလျှောက်ထား ရတယ်လို့ မှတ်သားရဘူး ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့က သူ့ပိုင်ဆိုင်တာကို သူပေးချင်သူကို ပေးလို့ရအောင် မသေမှီ ဘာသာပြောင်းပြီး သေတမ်းစာနဲ့ လွှဲခဲ့ကြတယ် လို့သိရတယ်။ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုမျိုး လွှဲခဲ့ဘူးတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။
အခု သတင်းစာက ကြေငြာတွေကို တွေ့တော့ ဒါတွေမသိ လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ဘာကြောင့်များ ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်ချပြီး ကြေငြာနေကြ တာလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်မိ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ မိသားစုရေးရာတွေနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ငွေကြေး ဥစ္စာ ခွဲဝေမှုတွေကို မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ နဲ့သာဆုံးဖြတ်ဘို့ ပြဌာန်းထားတယ် ထင်ပါတယ်။ (ထင်ပါတယ်လို့ထည့်ပြောရတာက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဥပဒေပညာရှင် မဟုတ်လို့ပါ။)
တကယ်တော့ အဲဒီ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်တွေဟာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။
နိုင်ငံတကာ (အနောက်နိုင်ငံတွေ) ရဲ့စံနှုန်းက လူကို ဗဟိုပြုပါတယ်။ လူဟာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ် – ဒါကြောင့် ပိုင်ဆိုင်တာကို ဥပဒေနဲ့သာမဆန့်ကျင်ရင် မိမိသဘောကျ စီမံပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို အခြေခံပါတယ်။
ဒီတော့ မိမိပိုင်ပစ္စည်းဆိုရင် မိမိကြိုက်သလို ပေးလို့ ရောင်းလို့ သုံးလို့ ငှားလို့ ရတယ်။ နောင်မှာလဲ ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ (သေတမ်းစာကဲ့သို့) ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေရဲ့ သဘောတရားက လူကို တယောက်ထဲလို့ မယူဆဘူး။ လူကို သူနဲ့ဆက်နွယ်နေ သူတွေအပေါ် တာဝန်ရှိတဲ့ သူလို့ယူဆတယ်။ သဘောက တစုံတယောက်ဟာ သူ့ပထမ ဇနီးသာမက သူ့ဒုတိယ/တတိယ စတဲ့ ဇနီးများ ၎င်းတို့အသီးသီးကမွေးတဲ့ သားသမီးများ အပေါ်မှာလဲ အသက်ရှင်စဉ်မှာရော သေဆုံးပြီးနောက်မှာပါ တာဝန်ရှိတယ် လို့ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ သေဆုံးပြီးတဲ့အခါ ရှေ့ကဘာပြောထားထား အမွေပုံဥပဒေစည်းကမ်း အတိုင်းပဲ ခွဲဝေရတယ်။ အသက်ရှင်စဉ်မှာတောင်မှ မမျှမတ မသင့်လျှော်စွာ သုံးစွဲ ပေးကမ်း ငှားရမ်း ရောင်းချ ခြင်းမျိုးပြုလုပ်ရင် နစ်နာတယ်လို့ယူဆတဲ့ မိသားစုဝင်တွေက တားမြစ်ဘို့ ဦးတိုက်လျှောက် ထားခွင့်ရှိပါတယ်။
အဲဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေက လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းနဲ့ ဒီကလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်း ကွာခြားချက် နမူနာပါပဲ။
ဘယ်ဟာကမှန်သလဲ ။ ဘယ်ဟာကိုကြိုက်သလဲ။
ဘယ်ဟာကိုကြိုက်ကြိုက် တကယ့်လက်တွေ့မှာ သိပ်မထူးပါ။ စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေကို တကယ် အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့ အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ လူလည်ကျနို်င်တာကသာ လက်တွေ့မှာ အရေးပါပါတယ်။
အမွေဖြတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် တာဝန်တခုခုကို တိမ်းရှောင်ချင်လို့ လုပ်တာဆိုရင် မှန်ပါတယ်။ တကယ်အမွေမပေးချင်ရင်တော့ အမွေဖြတ်စရာမလိုပါဘူး။
ကုန်အောင်သုံးပြီးမှ မသေသေးရင်တော့ ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပေါ့ ။
မြန်မာပြည်မှာတောင် သားဆိုး သမီးဆိုးတွေ အမြင်ကတ်လို့ မသေခင်ကတည်းက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖိုးတန် အိမ်တွေ မြေတွေကို ရွှေတိဂုံဘုရားကို လှူသွားတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။
အမွေခံ သားသမီး တယောက် အနေနဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့….
အမွေဆိုတာ ထိုက်မှ ရတာပါ။
လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတောင် သူများက ငါ့ဟာပါလို့ ပြောပြီး လုတာ ခံနေရသေးတာပဲ.. သေမှ ရမဲ့ အမွေကို မျှော်မနေချင်ဘူး။ ထိုက်ရင် ရမယ် မထိုက်ရင် မရဘူး။
ဟုတ်တယ် ဆူးပြောသလိုလုပ်ကြတဲ့မိဘတွေ ကြားဖူးတယ်။
အမွေဆိုတာ ထိုက်မှ ရတာပါ။.. ဆိုတာထောက်ခံပါတယ်၊ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တခုက…..
မိခင်ကစီးပွါးရေးအဆင်မပြေတော့ နိုင်ငံခြားမှာအိမ်ထောင်ကျပြီးပြန်လာတဲ့သားဖြစ်သူက မိခင်အတွက်ငွေ ၂သိန်းကန်တော့ပါတယ်၊ မိခင်ကလည်းဝမ်းသာအားရ ဈေးဝယ်ဖို့ သွားလိုက်တာ အဲဒီနေ့မှာပဲ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတာ အကုန်ကုန်ရော၊ ကိုယ်နဲ့မထိုက်တော့ တပြားမှမသုံးလိုက်ရဘူး။
သိချင်သူတွေ ဖတ်ပြီး.. ရေးပေးရင်ကောင်းမယ်..။
However, all of the above considerations are irrelevant if the decedent hadawill or living trust. For more information about wills, click here: Wills For information about living trusts, click here: Living Trusts
How an asset is titled may also change who will own it after one of the owners has died. See these pages for information about property ownership: Joint Tenancy and Tenancy in Common.
ကျုပ်နားလည်သလောက်.. မြန်မာပြည်မှာက…. အမွေဆိုတာ.. ယူတတ်မှရတာ..။
ယူတတ်တဲ့သူတွေ.. မောင်နဲ့နှမ.. ညီအကိုသားချင်း..လိမ်လည်လှည့်ဖျားယူပြီး.. ချမ်းသာနေတာတွေ.. တပုံကြီး..။
eros ရေ ဘာဖောင့်နဲ့ ရေးထားလဲ မသိဘူး။ ဖတ်လို့ မရဘူး။
erose ရေ ဦးသန့်ရေးတာဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ ၂ခါလောက်ဖွင့်ကြည့်သေးတယ်၊ ဘာ font တွေလဲမသိဘူး၊ဖတ်မရဘူး၊ post တင်ပေးပါလား။
MaMa နဲ့ nature ရေ စာမျက်နှာ ညာဖက် အပေါ်ဆုံးထောင့်မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးရှိတယ်။ အဲဒါ နှိပ်လိုက်ရင် ဖတ်လို့ရ ပါတယ်။